Ra’iisul Wasaare Rooble oo u jawaabey Madaxweyne Farmaajo.
September 14, 2021 Xuseen 14
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda xil-gaarsiinta ah ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble waxa uu ka digay isku day kasta oo lagu marin habaabinayo Kiiska Ikraan Tahliil.
Ha is raacdo diiddaye ha is raamsatee daa!!!!!
Tom & Jerry style. Somali madax-deedii waa taas.waxa moodaa 2ba Naagood oo lawada qabo.
Qacliga qaloocan baa sidaasa ma waxay wax ku qaadan waayeen dawladdii Afghanistan ee sidooda la biili jirey, lana illaalin jirey waxay ku dambeysay.
Waar u kaadiya wax Rooble la yidhaahdaa majiraane; midawgii baa jawaabay dhaha (kooxdii Marinaayo, Shiirkole & Bermuda). UNUKAA LEH!
Oday-Biiqay oo sii Biiqay. says:
Wallee Soomaali ayaan masuul xilkas ahi ka soo bixin. Waa arrinkii carabi ka tiri: “Tilka ayaam bayna naas.” Waxay Soomaali ahaan jirtayba, maanta darxumaa ka muuqata. Qoomkii jabaya waxaa lagu gartaa khilaaf madaxeed aan dhammaanayn. Qofka Soomaaliga ahi wuxuu cadow u yaqaan walaalkiis.
Allahayow sidaan si ka roon noogu beddel. Aamin!!!
Priminister ku jawaab sax ah oo mug iyo macne leh ayaa siiyay majnuunka waalan ee ini fargaajo. Waxaa cajiiba waxa ini fargaajo daba dhigay case Ikraan Tahliil ee uu uga ladi layahay, ini fargaajo wuxuu cadeeyay inuu case ka Ikraan si uun ugu lug leeyahay waxaana hubaal ah in wax walbaa banaanka imandoonaan mudo aan fogayn. Priminister ku waa musuul daacad ah waana ibnu xalaal ibnu xalaal dhalay.
FARMAAJO MADAX ADEEG IYO ROOBLE MOORYAN IYO KOOXDISA MUCAARADKA WAXABA ISMA DHAAMAN CID WADANKAAN U NAXEYSO MAJIRTO
Dhaqamada ka muuqda Rooble & kooxdiisu waa Ka mug weyn yihiin Farmaajo, waana ka shisheeyaan! Cidkasta oo aan beesha ahayn oo hunguri ka hayo BUURTA bay jawaab u tahay; UNUKAA LEH.
Waa sababta uu shib u yiri ee hadal looga waaysey odaygii Deni ahaa! Kkkk
Anigaba haddii uu hami iiga jiro Madaxweyne nimo meel sidaa ahi uma doonteen! Kkk
Ciiryaamo duuli hayaay Cadan ka keeneene!
Cirki iyo dhulkii baa is qabsaday cararaqdoodiiye!
Adiguba caqlaad leedahaye carar maxaa dhaama! Sayidkii kkkkkk
Dowladnimadii Waxaa si toos ah u inqilaabay oo raggiisii Wasiirro loo magacaabay Xasan Sheekh! Kkkkk
Wuxuuba u dhaqmayaa in isagu gacantiisa gabadha ku dilay.
HIS POLITICAL SURVIVAL AND REPUTATION IS AT STAKE AND HE DOESN’T EVEN KNOW IT
( Koley ani Madaxweynaha kama caqli badani laakiin sida wax u socdaan ma qurxana)
Jaalle A.A.Xade- Ishaad ka ridday!
Walaalkay Saciid Deni ayaamahanba indhaha ayuu ka mirigmirigsiinayey, or-orodkiina waa ka dhammaaday; xitaa tikniko iyo qoryuu ku wareejiyey reer BARAXLEY si ay bal ololihiisa u taageeraan, saa darkiibaa loo fadhiistay. War jiraaba CAKAARUU iman
Horta hore markii isqabqabsiga laga hadlayo waxaa wacan in suaashaan la isweydiiyo…. “Ikraan xaq muwadin ma leedahay”….. Hadii jawaabtu tahay… “haah”.. Roble waa ku saxsanyahay raadinta xaqeeda.
Qaaruun dhan ayaa Alle u halaagay dhibaato ay u geysteen ey.
Way dhici kadhaa in Roble iyo ururada musharaxiinta ay ku awr kacsanayaan kiiska Ikraan oo ay daacad ka ahayn digdigtoodu, laakiin suaasha isweydiinta mudan waxay tahay… “waa maxay sababta uu farmaajo u hortaagan yahay in gabadha la dulmay xaqeeda hesho”
Ma isagaa lug ku leh mise si axmaqnimo ah ayuu u difaacayaa saxiibkiis fahad yaasiin oo shakiga ugu weyn kor hoganayo.
Hadii maanta fahad iyo farmaajo ay si isweydaaris ah u kala joogi lahaayeen labaan boos ee ay hada kala jogaan, waxaan aaninsanahay in fahad uu surka soo qaban lahaa farmaajo oo uusan ku taageereen ama ku ciseyeen saxaabtinimo iyo si kale toona. Fahad axmaq ma aha.
Waa dhici kadhaa in farmaajo uusan ahayn axmaq laakiin uu fahad ka hayo faro-badan oo uuna farmaajo qool sagaaro ugu jiro fahad yaasiin. Walaahu yaclamu.
Waar ka daaya!
Nin baa waxaaa laga hayaa, “haddaan gafay iyo haddii kaleba hal 12 qadday baan ceel keenay.” Haddii Fahad eedaysane yahay iyo haddii kaleba, waxa uu yiri gole loo dhanyahay baan isku barraxayaa oo warbixinta NISA hayso, ee ku saabsan kiiska lagu soo bandhigayaa, waana la muddeeyey. Maxaa marka looga hordhacayaa oo loo digdig laynayaa?!
Dhinaca kale, annagu nma hayno wax caddayna in uu kiiska MADAXEYNUHU ku hor gudban yahay. Taa cagsigeeda waxa uu wakhti u qabtay warbixinta NISA, oo waxa uuna kiiska u saaray guddi ay ka codsadeen kooxdii QM ee dhowaan u timi, ee ay Amina hoggaaminaysay.
Intaa marka laga yimaaddo, gal dacwadeedka kiiska ee ay qoyska gabadhu furteen & warbixinta NISA & guddiga madaxweynuhu magacaabay, iskama hor imanayaan ee way iskaabayaan. Kiiskanina waa ka gudbay kiis maxalli ah, waa kiis caalami ah oo indho badani soo eegayaan. Sidaa daraadeed, nin waliba waa ka baqayaa, oo nin ku dhaca in uu hor istaago majiro.
Si kastaba, waxa aannu sugnaa waa warbixinta NISA ee 18ka bisha loo muddeeyey, haddii alle idmo. Waayo waxaa laga dhex helayaa macluumaad muhiim ah oo ay isticmaali karaan qolada baaritaanka, xeer ilaalinta & qareenada kiiska gali doona, haddii alle idmo. Wax badan baa la siyaasadaynayaa oo la qarinayaa, wayse soo bixidoonaan, haddii alle idmo. Qolo uunbay la fuqidoontaa, laakiin ka hordhicimaayo.
Gunaanadkii, WAR JIRAABA CAKAARUU IMAN. Inta ka horayDa, halla iska sii neefneefsadho.
Uma maleynayo in ay jidho cid kalsooni ku qabta gudiga madxweynuhu magacaabay iyo warbixinta ay soo saari doonaan, waayo, waa gudi hal dhan ka socda oo waxaa daaha gadaashiisa ka fadhiya ninka tuhunku saaran yahay ee ah fahad yaasiin. Hadii farmaajo iska fogeyn lahaa fahad yaasiin, oo uusan hadiyad uga dhigin Jago cusub ee ah lataliye madxweyne, way dhici lahyd in ay jirilahayd xoogaa yar oo ah kalsooni loo qabo gudiga. Waxay ahayd in madaweynuhu magacaabo gudi qaran oo wadanka tafihiisa ka kala yimid oo aan shuqul ku lahayn NISA iyo xukumada toona.